FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA GOLDEN RETRIEVER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Golden Retriever
Hadley the Golden Retriever amin'ny faha-6 taonany
Ny Golden Retriever dia alika matanjaka sy salantsalany. Mivelatra ny karandohany ary mahitsy ny vava, mihena kely miaraka amina fijanonana voafaritra tsara. Mainty ny mainty na mainty mainty. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso salantsalany ka hatramin'ny lehibe dia volontany mainty. Ny sofina somary fohy dia mihantona eo akaikin'ny takolaka. Rehefa sintonina mandroso ny tendron'ny sofina dia tokony hanarona ny maso fotsiny. Ny rambony dia matevina amin'ny fotony ary misy volom-borona manaraka ny ambany. Dewclaws azo esorina. Ny palitao mahatohitra rano dia matevina miaraka amin'ny palitao ivelany miorina, mahitsy na mikoriana. Misy volom-borona tsy voafehy eo ambanin'ny kibony, ao aorian'ny tongotra, eo anoloana ny hatoka ary eo ambanin'ny rambony. Ny lokon'ny palitao dia tonga amin'ny crème amin'ny volamena manankarena.
Ireto dia alika be fitiavana, tsara fitondran-tena, manan-tsaina miaraka am-bolo mahafinaritra. Izy ireo dia mora zatra , ary mahari-po sy malemy paika amin'ny ankizy foana. Mahafinaritra, mahafoy tena ary matoky tena izy ireo, dia alika fianakaviana malaza. Ny mpamaky volamena sy be fitiavana ary be fitiavana dia mankafy ny fahafinaretan'ireo tompony, koa ny fampiofanana ho fankatoavana dia mety hitondra valisoa lehibe. Miavaka amin'ny fifaninanana izy ireo. Sariaka amin'ny olona rehetra, ao anatin'izany ny alika hafa, ny Golden Retriever dia kely dia kely, raha misy izany, miaro instincts. Na dia mety tsy hanafika aza i Goldens, dia manamboatra mpiambina tsara, manambara mafy ny fomban'ny olon-tsy fantatra. Ity karazana ity dia mila manodidina ny olona mampiseho mpitarika ho faly. Ny Golden Retriever dia mety hanjary manimba sy / na avo lenta, mirehareha loatra ary tsy azo idirana raha tsy ampy isan'andro izy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Aza hadino ny mijanona ho mafy orina ity alika ity, fa mpitarika tony, matoky tena, tsy miovaova hisorohana olan'ny fitondran-tena . Ny sasany amin'ireo talenta an'ny Golden dia ny mihaza, manara-dia, mamerina, mahita zava-mahadomelina, mailaka, mankatoa mpifaninana ary manao tetika. Ireto alika ireto koa dia tia milomano.
Haavony: Lehilahy 22 - 24 santimetatra (56 - 61cm) Vehivavy 20 - 22 santimetatra (51 - 56 cm)
Milanja: Alika 60 - 80 pounds (27 - 36 kg) Vehivavy 55 - 70 pounds (25 - 32 kg)
Mora amin'ny cancer anisan'izany ny fivontosan'ny sela . Mora voan'ny plastika hipla, aretin'i Von Willebrand, aretim-po ary tsy fahatomombanan'ny maso hatrany am-bohony. Ny aretin-koditra dia mahazatra amin'ny Retrievers Golden ary matetika dia mitaky fikarakarana ara-biby. Miezaha hanana lanja mora foana fa aza be loatra.
Ity karazana ity dia tsy haninona ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Izy ireo dia mazoto miasa ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra farafahakeliny medium na tokotany lehibe.
Ny Golden Retriever dia mila raisina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao, izay anaovan'ny alika ny ombelahin-tongony eo anilany na aorinan'ilay mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny làlana ary tokony ho olombelona ilay mpitarika. Ho fanampin'izay, tian'izy ireo ny mamerina baolina sy kilalao hafa. Aza hadino ny mampiasa an'io alika io tsara hisorohana ny hyperactivity.
Ny fikosehana tsy tapaka ny palitao lava lava dia hitazonana azy ho salama tsara, saingy ilaina ny fitandremana fanampiny rehefa mandatsaka ny palitaony matevina ilay alika. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary diniho manokana ilay akanjo lava matevina. Shampooo maina tsy tapaka, fa mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Avy tany amin'ny havoanan'i Scottish tamin'ny faran'ny taona 1800, ny Golden Retriever dia novolavolain'i Lord Tweedmouth, tamin'ny alàlan'ny fiampitana ilay Retriever vita amin'ny Flat-Coated Yellow izay misy ankehitriny lany tamingana Spaniel momba ny rano . Niampita ny Bloodhound , Setter Irlandey ary bebe kokoa ny Spaniel Water Tweed. Ny alika dia nantsoina hoe Golden Flat-Coat ary taty aoriana dia nomena anarana Golden Retriever izy ireo. Ny Golden Retriever dia iray amin'ireo karazana malaza malaza ankehitriny, tsy vitan'ny mpiara-mitory amin'ny mpianakavy fotsiny fa ho an'ny fifaninanana fankatoavana, fihazana ary fanarahan-dia, toy ny vorona mpihaza eny amin'ny tany roa sy anaty rano, ny fikarohana ny zava-mahadomelina, ny alika fanompoana ho an'ny sembana, torolàlana ho an'ny ny jamba ary toy ny alika fitsaboana. Ny Golden Retriever dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1925.
Spencer the Golden Retriever amin'ny faha-3 taonany— 'Tian'i Spencer ny mitsidika ny lavaka famorian-drano eo an-toerana. Nitsambikina avy teny amin'ny hantsana mirefy 8 metatra izy izay niditra tao anaty rano. Raha manipy tsorakazo ao anaty rano ianao dia hitsambikina izy ary haka izany ho anao. '
Rigel the Golden Retriever amin'ny faha-9 taonany
Dosporuno the Golden Retriever amin'ny 5 volana— 'Salama, manoratra aho satria vao haingana dia naka Golden Retriever 5 volana. Raha ny marina dia natahotra aho nanao an'izany hatramin'ny nananganan'ny zanak'olo-mpianadahy ahy a Labrador alika mijery ary devoly izy. Ny antony natahorako dia satria tsy te hanana alika tsy voafehy miaraka amiko aho. Rehefa avy nikaroka sy namaky ary nijery horonantsary sy maro hafa aho dia nahita ny pejinao. Niara-niasa tamin'ny soavaly ary nampiasa ny fomba Monty Robert ho an'ny soavaly voajanahary , Tena gaga aho fa manana lohahevitra mifandraika amin'ny alika ianao. Ampihariko amin'ny alikako ny fombanao ary miasa toy ny oody izy ireo. Tsapako izao fa ny olana amin'ny zanak'olo-mpianadahy amiko dia ny namelan'ny fianakaviany ny alika ho lasa alfa ao amin'ny 'fonosany' (tokatrano) ary izany no antony tsy voafehy ilay biby. Amin'ireto teny vitsivitsy ireto dia manandrana milaza fotsiny aho fa misaotra betsaka satria ny zavatra niainako niaraka tamin'ny alikako dia nahafinaritra kokoa izao satria fantatro tsara kokoa ny alika sy ny fomba hitondrako biby. Na izany aza hendry amin'ny tenan'ny vatana ny alika ary mamaky hafa noho isika. Nataonao tsy mampino ny zavatra niainako ary nisy zavatra toa fanamby nanjary nahafinaritra, nahafinaritra ary nitondra valisoa avy hatrany. Efa nozaraiko tamin'ny namako sy fianakaviako izay manana alika ny pejinao ary azoko antoka fa ho fanampiana lehibe ho azy ireo koa ianao. Misaotra indrindra anao! Juan Jose '
'Ity no Golden Retriever Marley ahy. Vao 10 volana izy eo amin'ny sary ary izy no alika mahatalanjona indrindra azonao angatahina. Toy ny ankamaroan'ny Golden Retrievers, tiany ny rano. Alika tsara fitondran-tena izy ao an-trano sy an-tongotra, indrindra rehefa nampiofaniko izy mihazakazaka eo akaikiko, hatrany aloha . 1 taona izy izao ary nampahafantarina kely Alika kely beagle antsoina hoe CoCo . I Marley no alika tsara indrindra sy be fitiavana amin'ny alika hafa rehetra, indrindra fa i Coco, ary malemy fanahy tokoa rehefa milalao aminy. Ny Golden Retrievers dia tena karazany mahagaga. '
'Portia dia Golden Retriever roa taona. Feno heriny sy hafaliana miaraka izy. Mampihomehy izy, ary namana sy namana mahafinaritra. Nampihatra ny teknika fanofanana maro an'i Cesar Millan tany Portia aho. Ilay iray nisy fiatraikany lehibe indrindra dia ny tsy niantsoantso rehefa nanitsy azy ireo, fa kosa niresaka tamin'ny feo malefaka sy hentitra. Amin'ny maha-tompon'ny alika anao dia sarotra ny milamina hatrany rehefa ny alika no mitsako ny kiraro tianao indrindra! Na izany aza, hitako fa voavaha amin'ny fomba mandaitra kokoa ny olana rehefa manitsy azy aho nefa tsy mampiaka-peo. '
Alika mahafinaritra i 'Portia. Mahafinaritra ny toetrany ary mamy be izy. Tsy hanana alika hafa mihitsy aho! '
firy ny alikakely afaka manana dane lehibe
'Nalaiko tao an-trano ity sary ity. Ao amin'ny sary, miandry am-pahamendrehana izy ireo amin'ny sit-biscuit. Avy ankavia miankavanana: Sailor sy Salty. Izy ireo dia Golden Retrievers miloko krosy 7 taona. Ny tompony teo aloha dia naka azy ireo ho an'ny zanany fa vetivety dia tsy liana tamin'izy ireo intsony izy ireo. Fony 3 taona ny alika dia nomen'ny tompony anay izy ireo satria tsapany fa tsy afaka nanome azy ireo ny fikarakarana ilain'izy ireo. Izy ireo dia samy alika tsara indrindra nananantsika ary ahitsy tsara. Tena afaka milaza aho fa samy mahay mandanjalanja ary tsy manana olana amin'ny fitondran-tena tokana. Samy tia ny rano izy ireo ary hilomano tontolo andro. Izy ireo koa dia manandrana ary indraindray mahomby amin'ny fisamborana trondro kely ao amin'ny renirano sy ny farihy izay entinay mankany 3 ka hatramin'ny 5 isan-kerinandro hamela azy ireo hilalao sy handoro angovo. '
'Rahalahy Golden Retriever roa mipetraka eo amin'ny toeram-ponenana mahafinaritra any an-tokotanin-dry zareo, mitady tsara ny fakantsary — eo ankavia kosa i Little Du, 5 taona, ary eo amin'ny ankavanana dia i Rocky, 6 taona. Rocky dia alika fitsaboana voasoratra anarana ao amin'ny Delta Society ary mitsidika trano fitaizana be antitra sy hopitaly. Manomboka ny fampiofanana azy amin'ny ririnina i Dutchy. Samy nanao kilasy haingam-pandeha ihany koa izy ireo ary ankafizin'ny fianakavian'olombelona. Woof! '
'Ity no zanako, reharehako sy fifaliako. Sierra no anarany. Sierra Retriever volamena madio i Sierra. Niaraka nandritra ny 18 taona izahay mivady ary 17 tamin'ireo niangavy azy ireo aho mba hahazo alika. Nanaiky izy tamin'ny farany ary nanomboka ny fihazana. Tsy sahy naka alika izy satria nipetraka tao amin'ny trano iray izahay (mipetraka amin'ny trano iray izahay izao) ary niasa tontolo andro. Tsy noheveriny ho rariny ho an'ny alika izany. Mampihomehy satria rehefa nahazo azy izahay dia novambra ary nisy nilaza hoe: 'Dog Whisperer' ka nanomboka nijery azy aho. Faly be aho fa nanao. Be dia be ny zavatra nianarako avy taminy. Hataoko kasety izany, ary rehefa mody avy any am-piasana aho, rehefa avy mandeha an-tongotra any Sierra dia hipetraka sy hijerena azy (sy hilalao) miaraka izahay. Ny faharetana nianarako tamin'io lehilahy io. Sarotra ny nitaiza alika kely rehefa afaka 30 taona ny tsy fananany. Alika sy saka aho no nihalehibe. Ny zavatra lehibe indrindra nanampy ahy dia ny fitadidiana ny famerimberenana sy ny fiderana. Sierra dia mpianatra nianatra haingana. Tsy sombin'ny fanaka na kirarontsika na zavatra hafa nahazo mihinana . Nifanaraka tsara i Sierra. Tena voajanahary izy. Tiany ny mihetsika amin'ny tongotray ary tsy afaka miteny ny teny hoe 'kamio' ianao raha tsy mihazakazaka amin'ny varavarana any aoriana mba handeha hitsangatsangana. Hatramin'ny naha-zazakely azy dia nitondra azy saika na taiza na taiza isika. Nahita mahafinaritra izahay zaridaina alika izay tiany hilalaovana. Avy tany a fako misy alikakely 5 ary rehefa handeha haka azy izahay dia nataoko ny famindra ny rantsan-tànana hahitana hoe iza no handinika ary izy no izy. Hendry tokoa izy ary mitondra fifaliana toy izany ho ahy amin'ny andro tsy dia mahafaly. Ny fiarahabany ahy am-baravarana fotsiny miaraka amin'ny 'Dimy Avo' no manazava ny androko. Sambatra izahay niaraka tamin'i Sierra. Ny vadiko izay tsy naniry alika dia tsara aminy. Tiany ny mitondra azy any amin'ny valan-javaboary sy miara-mandeha aminy. Heveriko fa nilaza zavatra momba ny maha-andriambavy azy izy. LOL, afaka nandeha nitohy aho. '
'Ity i Casey, ilay zazakely volamena mahafatifaty sy miloko amin'ny 12 volana. Cutie toy izany izy. Izy tsy tia afa-tsy a mihazakazaka any anaty ala ny maraina sy ny hariva, ary misolelaka rehefa reraka. Tiany ny manenjika baolina sy kibay ary afaka milalao tontolo andro. Tiany ny fampiononany, koa, ary famihinana lehibe mahafinaritra! Fantany ny baiko betsaka, mipetraka, mijanona, miandry, mandry, mihodinkodina, avelao, mandeha amin'ny voditongotra ary tena mangina sy mankatò. Tena be fitiavana sy be fitiavana izy ary mamirapiratra amin'ny biby hafa rehetra. Tena vatosoa kely izy. '
Golden Retrievers Hunter (havia) ary Max (ankavanana) mipetraka tsara eo amin'ny fipetrahana
Jack, Golden Retriever toy ny alika kely amin'ny 11 herinandro izay nametraka teo akaikin'ny vilia fihinanany
Jack, Golden Retriever efa lehibe daholo!
Sadie manao palitao alika fitsaboana — mandeha any amin'ny hopitaly sy trano fitaizana be antitra i Sadie hitsidika olona ary tiany ny asany. Izy dia aseho eto amin'ny 1 ½ taona.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Golden Retriever
griffon brussels mainty sy mainty
sarin'ny alika kely chow chow
mpivaro-tena mpiambina mix mix